Imotorsport | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Ingakanani imoto ye-formula 1
Ixabisa malini imoto eyiFomula 1 "Ixabiso lemoto eyiFomula 1 linokufikelela kumaxabiso ukusuka kwi-600 lamawaka ukuya kwisigidi seedola" bubuxoki obucacileyo, kuba uMaria Morgun wandixelela kanye emehlweni am: ...
I-racer eyaziwayo kakhulu ye-formula-1
Umdyarho odumileyo weFomula 1 ngoku nguSchumacher. Abantu besinye isizukulwana babenezinye izithixo - u-Alain Prost, u-Ayrton Senna. USenna Aerton Senna (kude kube phakathi kwe-90s) Emva kwexesha-uSchumacher Ewe uSchumacher Ngokubanzi ...
Yintoni i-slalom? Igama-SLALOM: Kwezemidlalo: ukuhamba ngesantya esiphezulu ecaleni kwendlela enqamlezileyo. -bukhulu kwaye bukhulu c. Ukuhla kweentaba kwiiskisi ecaleni kwendlela ende. Ilali yokuskiya emanzini Umoya s. ku…
njani isantya esiphezulu senqwelo ye-formula 1
Sesiphi esona santya siphezulu kwimoto yeFomula 1 ngokweSportbox.az ngokubhekisele kwiGrandPrix247, iBottas inyuse isantya ukuya kwi-2,2 km / h kumgaqo othe ngqo wekhilomitha eyi-378 kuhola wendlela iBaku. Ingxelo yomdyarho yangaphambili yayi ...
I-0113 - Inzwa yeqondo lokushisa lomoya, inqanaba eliphezulu lemveliso.
0113 -Inzwa yokungenisa ubushushu bomoya, imveliso ephezulu. Kwi "Boshevsky" ubunzima bokuhamba komoya, inzwa yeqondo lobushushu elihlangeneyo. Kwimeko yakho, kubonakala ngathi iyafana. Ukuba kukho iimpazamo ezimbini kunye nenzwa yokuhamba komoya ...
Imibuzo ye-80 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,873.